Kodzero-dzevanhu, 07 Gumiguru 2019
Muvhuro 7 Gumiguru 2019
Gumiguru 07, 2019
Vamwe Vanhu Vonetsekana neKuwana Magwaro Akakosha kuManicaland
Mamwe madzimai anoti mapiritsi ekuronga mhuri avari kunwa ari kuvakonzeresa kutevera kwenguva yakareba inosvika masvondo matatu izvo zvave kuita kuti vatizwe nevarume.
VanaChiremba Voramba Kurudziro yeHurumende Yekuti Vadzokere kuMabasa
Vanachiremba munyika varamba kutambira kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa.
Musangano Mukuru Wevechidiki Inoitwa MuHarare
Sangano reZimbabwe Council of Churches, rakabatana nemamwe masangano akaita se Impact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe, vakaita musangano mukuru wevechidiki muHarare pakupera kwesvondo.
Gumiguru 06, 2019
Hurumende Yoshoropodzwa Nekuda kuVandudza Mutemo weSarudzo yeMutungamiri weNyika
Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanozopinda musarudzo yemutungamiri wenyika vatange vadomwa nevanhu vanosvika chiuru kubva mumatunhu gumi emunyika, uye kuti mari dzavanobhadhara kuti vakwikwidze dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora.
Gumiguru 05, 2019
Varairidzi Vocherechedza Zuva Ravo reWorld Teachers Day
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa, VaObert Masaraure, vanoti vapinda muhurukuro dzaitwa panguva iyo pasi rose ranga richicherechedza mabasa akanaka ari kuitwa pasi rose nevarairidzi.
Madhokotera Anoramba Kutambira Mari Yakawedzerwa neHurumende Achiti Ishoma Zvikuru
Sangano ravana chiremba re Zimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba.
VaMnangagwa Vokurudzira Kubatana, Kuwirirana Kuitira Kuti Nyika Ifambire Mberi
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti vanhu vose vanofanirwa kutaurirana, kuwirirana, kushanda pamwe chete uye kusavengana kuitira kuti nyika ibudirire.
Nyaya Iri Kupomerwa Muzvare Khumalo Inoraswa neDare
Mutongi wedare, VaTinashe Tashaya, vati pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, pane chikamu chinotaura pachena kuti munhu anenge asungwa nemhosva seyaipomerwa vanomwe ava, anomiswa mberi kwedare chete kana muchuchisi wehurumende apa mvumo yekuti nyaya iyi itongwe.
Studio7 neMedia Center Dzinopeta Misangano Yadzo
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaJob Sikhala, vakati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, hupfumi, nenyaya dzesarudzo uye zvinoda kuti vanhu vese vagare vaite nenhaurirano dzine musoro.
Gumiguru 03, 2019
Nyanzvi Dzozeya Dambudziko reMagetsi neMvura
Mutevedzeri wegurukota remhando dzemoto, Amai Magna Mudyiwa, vati kuti nyika ive yasvika panyika dzinoverengwa sedziri pakati nepakati pekubudirira mugore ra2030, inenge yave kushandisa magetsi anosvika11 500 mega watts.
ERC Yoshushikana neMitemo Inobata Sarudzo
Vachiparura gwaro reongoorora yezvinhu zvakakakosha zvinoda kugadziriswa kuitira kuti nyika iite sarudzo dziri pamutemo sezvinodiwa nrbumbiro remitemo yenyika, mukuru weERC, VaTawanda Chimhini, vati mitemo yesarudzo hausati wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro iri.
Magweta aVaChamisa naMuzvare Khupe Onetsana Mudare reSupreme Court
VaMnangagwa Vokurudzira Kutengeswa Kunze kweZvinhu Zvinodzairwa muZimbabwe